१३ बैशाख २०७५ | April 27, 2018
​सुन तस्करीमा सरकारकै कनेक्सन ?
Tuesday, 10 Jan, 2017 12:57 PM
काठमाडौं, २६ पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘सेटिङ’ मा पटक–पटक सुन तस्करी भएको खुलेपछि यसले दुई दशकअघि सरकारकै मिलेमतोमा हुने सुन तस्करीको घटना सम्झाएको छ । जसरी २०५२÷०५३ सालमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यसैगरी सरकारकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भइरहेको स्पष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उपसचिव नारायणप्रसाद सापकोटालाई एयरपोर्ट भन्सार प्रमुख बनाएपछि सेटिङमा सुन तस्करी हुन थालेको हो । भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा पटक–पटक सुन तस्करी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै खुलिसकेको छ । ‘कर्मचारीको मात्र मिलेमतोमा यसरी बारम्बार सुन तस्करी सम्भव छैन,’ अनुसन्धानमा आबद्ध सिआईबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा उच्च तहकै मिलेमतो छ ।’
अनुसन्धानका क्रममा बिहीबार साढे ३३ किलो सुनसहित पक्राउ परेका तीन युवकले विगतमा पनि विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन भिœयाएको बताएका छन् । अझ डरलाग्दो कुरा त उनीहरुले आफ्नो लगेजको बारेमा पहिले नै जानकारी दिने गरेको र भन्सारका कर्मचारीहरुले चेकजाँच नगर्ने गरेको बताएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) स्रोतका अनुसार उनीहरूले कम्तिमा ८–१० पटक विमानस्थलबाट अवैध सुन भिœयाइसकेका छन् । यो तथ्यले विमानस्थलका भन्सार कर्मचारी तथा प्रहरीको मिलेमतोमै सुन तस्करी हुँदै आएको प्रस्ट भएको छ । पक्राउ परेका गोपालबहादुर शाहीले तीन महिनामा ६ पटक दुबईबाट सुन ल्याइसकेका थिए । बयानको क्रममा उनले दुबईबाट पटक–पटक सुन ल्याएको बताएका छन् । तस्करहरूले नै भिजिट भिसामा उनलाई दुबई पठाई सुन ओसारपसारमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । शाहीको पासपोर्टमा उनी पटक–पटक दुबई गएको देखिन्छ ।
सुन पटक–पटक भित्रनु र विमानस्थलमा कहिल्यै बरामद नहुनुले तस्करीमा विमानस्थलका भन्सार कर्मचारीको मिलेमतो प्रस्ट भएको छ । विमानस्थलको आवागमनमा प्रहरीलाई चेकजाँचको अधिकार नभएकाले भन्सारसँग तस्करहरूले सेटिङ मिलाउने गरेका छन् । तर भन्सारको ड्यूटी परिवर्तन भइरहने भएकाले हाकिमको मिलेमतोबिना यस्तो सेटिङ असम्भव छ । एयरपोर्ट भन्सारका हाकिम नारायण सापकोटा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पनि बिश्वासपात्र हुन् ।
नाइके को ?
यस घटनामा प्रहरीको पनि त्यसमा मिलेमतो हुनसक्ने आशंकामा छानविन अघि बढाइएको छ । सिआइबीले सुन लिएर आएका शाही तथा सुन लिन गएका दिलबहादुर थापा र सन्तोष काफ्लेलाई पक्राउ गरेको छ । थापा र काफ्लेको साथबाट समेत सुन बरामद भएको छ । उक्त सुन पनि विमानस्थलबाटै तस्करी भई आएको खुलेको छ । तर, प्रहरीले मुख्य तस्करलाई अझै पहिचान गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार मुख्य तस्कर भारतीय छन् । सन्तोष काफ्ले र दिलबन्धु थापा दुबईमै बसेर पटक–पटक तस्करीमा संलग्न व्यक्ति हुन् । उनीहरुलाई प्रयोग गरी भारतीयहरुले सरकारस‘गको सेटिङमा तस्करी गराउँदै आएका थिए ।
सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । दुबई, भारत र नेपालमा गरी तीन तहको गिरोहले सुन तस्करी गर्दै आएको छ । दुबईमा रहेको समूहले विभिन्न सामानभित्र लुकाएर सुन सुटकेसमा प्याक गर्ने र त्यो सुन शाहीलगायत नेपाली युवाहरूले लिएर आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूले काठमाडौंमा आएर अर्काे भरियालाई सुन दिन्थे, जसले उक्त सुन मालिककोमा पु¥याउँथे । सोही सुन नेपालका सुन पसल तथा भारतीय बजारसम्म पुग्दथ्यो । तर, हालसम्म मुख्य कारोबारी प्रस्ट भइनसकेको सिआईबीका डिआइजी नवराज सिलवाल बताउँछन् ।
छानबिनमा आईजीपी नै सक्रिय
यो सुन तस्करी प्रकरणको छानबनिमा आईजीपी नै सक्रिय भएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले शुक्रबार बिहान सिआइबी कार्यालय पुगेर भरिया मात्र नभई सुनका मुख्य तस्करलाई नै पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन् । सधैैं सुन बरामदको घटनामा भरिया मात्र पक्राउ गर्दा तस्करी नियन्त्रण नभएको भन्दै उनले तस्करलाई नै पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका हुन् । एयरपोर्टमा प्रहरीको गल्ती भेटिए प्रहरीमाथि समेत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । आइजिपीको निर्देशनपछि पक्राउ परेका तीन युवक उपर थुनामा राखेर सिआइबीले संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसअघि सुन बरामद हुँदा तत्कालै राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाउने गरिएको थियो । बिहीबार पक्राउ परेकालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राख्न पाँच दिनको म्याद दिएको छ । संगठित अपराध मुद्दामा प्रहरीले तीन महिनासम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ । ‘यात्रुको खल्तीमा एउटा सिक्का राख्दा त एक्सरे मेसिनमा देखिन्छ, यति धेरै सुन विमानस्थलबाट भित्रनु आश्चर्यजनक कुरा छ,’ आइजीपी अर्याल भन्छन् ‘विमानस्थल कसरी तस्करीको अड्डा बन्न पुग्यो, यसको जरा खोतल्न निर्देशन दिएको छु ।’
त्यस्तै शनिबार आईजीपी अर्याल एआईजी प्रतापसिंह थापा र डिआईजी सिलवाललाई लिएर एयरपोर्टको चेकिङमा निस्किएका थिए । उनले पक्राउ परेका शाहीको बारेमा अध्यागमनबाट आफैं विस्तृत विवरण लिएका छन् । उनको प्रहरीसँगसमेत सेटिङ हुनसक्ने आशंकामा आफैंले कल डिटेलसम्म लिएको स्रोत बताउँछ । तर उच्च नेतृत्व तानिने भएकाले पनि आईजीपीले यसमा चासो दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएन
यति ठूलो घटनाको छानबिनमा अर्थ मन्त्रालयले नै चासो दिनुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन । किनकि मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको मिलेमतोमा पटक–पटक सुन तस्करी भइरहेको छ । लाज लुकाउन भन्सार विभागले एयरपोर्टमा कार्यरत २९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी छानबिन अघि बढाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विभागका तीनजना र कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिव सदस्य छन् । त्यस्तै, एयरपोर्ट विमानस्थलको चेकिङ तथा स्क्रिनिङमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिहीबारदेखि जिम्मेवारीमुक्त बनाइएको छ ।
किन हुन्छ तस्करी ?
प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुन तस्करीमा मुख्य दुई कारण छन्, भारतमा सुन खरिदमा लागेको नियन्त्रण र हुन्डीको कारोबार । भारतमा सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न सुनको कोटा निर्धारण गरेको छ । जुन बजारको मागभन्दा कम छ । त्यहीकारण नेपालबाट तस्करी गरी भारतमा सुन पु¥याइन्छ । त्यसरी तस्करी गरी भारत पु¥याइएको एक किलो सुनमा करिब १० लाख मुनाफा हुने गरेको छ । नेपालमै सुन पसलमा बिक्री गर्दा पनि भन्सार तिर्नुनपर्ने भएकाले किलोमा करिब ५ लाख नाफा हुन्छ । जसअनुसार एक चोटी सुन तस्करी गर्दा करिब एक करोड कमाउने गर्दछन् । सुन तस्करीमा धेरै नाफा भएकाले पनि ठूलो मात्रामा नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको छ । भन्सार नतिरी सुन भिœयाउँदा एक किलोमा करिब पाँच लाख नाफा हुने गर्दछ । अहिले बजारमा सुनको अभाव रहेकाले पनि तस्करी बढेको हो । तस्करीको सुन राजधानीका सुन पसलबाटै बिक्री हुने गरेको विगतका प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् । चीनबाट सडकमार्ग हुँदै आउने सुन प्रहरीले पटक–पटक बरामद गरे पनि विमानस्थलबाट आउने सुन ठूलो परिमाणमा यसरी बरामद भएको यो पहिलोपटक हो । सुन तस्करीमा हुन्डी कारोबारको सम्बन्धसमेत जोडिएको छ । हुन्डीको कारोबार मिलाउन साउदीबाट नेपालमा सुन तस्करी भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुन र हुन्डीको कारोबारमा एउटै समूह संलग्न छन् । यसमा खासगरी भारतीय व्यापारीहरु छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पारी तस्करी गर्दै आएका थिए ।
भारत–नेपाल–चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारीबारे बहस सुरु
​महावीर पुनको ‘मेकर स्पेस’लाई वृज सिमेन्टको साथ
​मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका घाइते मेयर मदनसुन्दरको माग : ‘अपराधीलाई छिटो कारवाही होस्’
​कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि ठगी अपराधमा पक्राउ
​चौतारीले एक दिने अदालती रिपोर्टिङ तालिम सञ्चालन गर्ने
​'देशकै मुहार फेर्ने नीति तथा योजनाको तयारीमा वाम गठबन्धन सरकार’
​गीतकार अधिकारीको ‘देउरालीको फूल’
​सयौ घरमा डेंगु पोजेटिभ भेटिएपछि सर्तकता अपनाउन आग्रह
​फिल्ममा भूकम्पपीडितको कथा
​विद्यार्थी नेतृ तथा एमाले सांसद नविना लामाले गरिन् विहे
​खगेन्द्रको ‘सिँगौरी’, अलिशाको आनाकानी